City of Vantaa - 20210202_virusmuunnos_somali
Vantaa waxaa laga helay nooca cusub ee feyruska korona - Hagsitii hore u jirtay ayaa la sii qeexay
Waalidiinta sharafta leh ee ka mas’uulka ah carruurta iyo dhallinyarada,
Vantaa waxaa laga helay nooca cusub ee feyruska korona ee sida fudud u faafa. Islamarkii la helay warbixinta ku saabsan nooca cusub ee feyruska korona, Waaxda dabaggalka cudurrada faafa ee Vantaa arrinkaas tixgelin ayay siisay.
Dhammaan dadka u nuglaaday feyruska korona waxaa la gelin doonaa karantiil 14 maalmood ah. Haddii la tuhunsan yahay in arrinka taagan uu yahay u nuglaanta nooca cusub ee feyruska korona, dadka u nuglaaday feyruska waxaa saamiga baaritaanka laga qaadi doonaa laba goor, xitaa haddii aanay lahayn wax tilmaamaya astaamaha qaadista feyruska korona.
Dadka u nuglaaday feyruska waxaa saamiga baaritaanka laga qaadi doonaa islamarka karantiilku u bilowdo, marka labaadna waxaa laga qaadi doonaa laba maalmood kahor dhammaadka karantiilka. Baaritaanka waxaa lagu sameeyaa goobo badan oo lagu qaado baaritaanka korona, baaritaankuna waa lacag la’aan.
Waraysiga lala yeelanaayo dadka u nuglaaday feyruska (dabaggalka faafista) waxaa haatan tixgelinta la siin doonaa, in arrinku uu yahay nooca cusub ee feyruska korona. Sababtaas awgeed ayaa dabaggalka cudurka marka la samaynaayo, waxaa si dhab ah loo caddayn doonaa, in xaaladda haatan jirta ay xiriir la leedahay safar dibadda ah iyo inkale.
Nooca cusub ee feyruska korona waxaa si fiican loogu ogaan karaa baaritaanka korona. Dadka u nuglaaday feyruska korona ee aan astaamaha cudurka lahayn waxaa la baari doonaa laba goor. Haddii mudada karantiilka lagu jiro ay soo baxaan wax astaamaha cudurka ah, waa in baaritaanka si dhakhso ah loo tago.
Dadka u nuglaaday feyruska iyo waalidiintooda waxaa loola soo xiriiri doonaa si gaar ah, tusaale ahaan dhanka farriimaha Wilmada, waxaana ay heli doonaan tilmaanbixinno ama hagis aad u faahfaahsan. Sidoo kale xannaanooyinka, iskuullada iyo macaahidda waxbarashada, waxaa waalidiinta loo diri doonaa warbixinta ku saabsan suurtaggalnimada nooca cusub ee feyruska korona, waxaa sidoo kale wali loo sii diri doonaa warbixnaha feyruska caadiga ah ee korona. Baaritaanka lagu hubinaayo nooca cusub ee feyruska korona wuxuu qaataa waqti dheer, sababtaas awgeed ayaa xoojinta in arrinka taagan uu yahay nooca cusub ee feyruska iyo inkale, waxaa ay haatan qaadanaysaa qiyaastii laba toddobaad. Cudurka uu sababo nooca cusub ee feyruska korona, sida ay sheegayaan warbixinaha haatan la hayo, ma ahan mid ka daran ama ka khatarsan kii hore.
Faafista cudurku wali aad bay u badan tahay
Toddobaadyadii la soo dhaafay tirada faafista feyruska korona waxaa ay ahayd mid deggan, marka loo eego tirada dadka feyruska laga helay. Si kastaba faafista cudurku wali waa ay badan tahay.
Xillligaan haatan ah baaritaanka waxaa taga dad aad u yar. Waa in baaritaanka si dhakhso loo aadaa, xitaa haddii astaamaha cudurka ee qofka hayaa ay yihiin kuwo fudud.
Astaamaha feyruska korona waxaa ay isku mid yihiin kuwa hargabka iyo calool-xanuunka. Tusaale ahaan, astaamaha cudurka waxaa ka mid ah: Qandho ama xummad, qufac, madax-xanuun, lallabbo, shuban, muruq-xanuun, dhuun-xanuun, hargab, adkaanta neefsashada ama urta iyo dhadhanka oo qofka ka taga. Baaritaanka feyruska korona waxaa laga qaadayaa dhammaan dadka ay hayaan astaamaha cudurka feyruska korona, iyadoo aan loo eegeynin da’da uu qofku jiro.
Magaalada Vantaa waxaa baaritaanka lagu aadi karaa, iyadoo laga qabsanaayo ballan dhanka elegtorooniga ah barta internetka ee cinwaankeedu yahay Koronabotista, ama telefoonka talosiinta korona ee maalmaha shaqada inta u dhexeysa saacadda 8–18, iyo wiikendhiga inta u dhexeysa saacadda 9–18, telefoonka ah 09 839 50070. Natiijada baaritaanka waxaa ay diyaar ku noqonaysaa 1-2 maalmood
Wali waa in la sii wadaa u hoggaansanka iyo qaadashada taxaddarkii hore u jiray
Nooca cusub ee feyruska korona waxaa looga hortagi karaa, si lamid ah sida looga hortagaayo feyruska kale ee korona
Haddii aad astaamo yeelato, waa in aad aaddaa baaritaanka korona, gurigana aad joogtaa.
Xusuusnoow kala fogaanshaha
Si taxaddar leh u samee nadaafadda caafimaadka wanaagsansan ee gacmo dhiqista iyo qaabka loo qufaco.
Ardayda fasalka 6-aad iyo wixii ka sii weynba, waxaa loo soo jeedinayaa in ay qaataan afshareerka.
Sidoo kale shaqaalaha xannaanooyinka, iskuullada iyo macaahidda waa in ay qaataan afshareerka.
Iskuullada dhexdooda waxaa ka dhacay wax aad u yar oo faafista feyruska korona ah. Si dhab ah ayaa loola socon doonaa tallaabooyinka loo baahannyahay in la qaado, sababta jirta ee noocan cusub ee feyruska ah awgeed, si ay xaalaaddu u noqoto mid wanaagsan xilliyada soo socda. Waxaana iskuullada laga sameeyay tallaabo kahortag ahaan ah, taasoo ah in la yareeyo wadaxiirka dhow ee dadka. Sidoo kale ayaa qoysaska dhexdooda waxaa laga doonayaa in ay u hoggaansamaan tallaabooyinka taxaddar ahaanta loo qaadanaayo, oo tusaale ahaan ay iska daayaan isu martinta ama isu imaatinka iyo seexashada guryaha dadka kale. Arrinkaan wuxuu khuseeyaa xitaa ardayda isku fasalka ah, waayo khatarta faafista ee jirtaa waxaa ay noqoneysaa mid aad u weyn oo ku xiran, haddba inta ay carruurtu iskaga soo dhawaanayaan oo ay xilli dheer isla joogayaan.
Salaan kal iyo laab ah naga gudooma,
Waaxda nadaafadda caafimaadka iyo cudurrada faafa